निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै विसंगति र विकृति भित्रिए। अन्य क्षेत्रभन्दा चिकित्सा क्षेत्र धेरै संवेदनशील भएकाले यसमा आएका विकृति सिधै नागरिकको जीवन र मरणसँग जोडिएका हुन्छन्। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका विकृति सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने बृहत उद्देश्य बोकेर डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनसन बस्दै आउनुभएको छ। उहाँले पहिलादेखि नै चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तरीयता, पिछडिएको ठाउँ र वर्गमा यसको पहुँच, सुगम र दुर्गम ठाउँबीच रहेको खाडल मेट्नुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ। डा. केसीले निःस्वार्थ भावले राख्नुभएका माग र त्यसका लागि उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको अनसनको बाटो सराहननीय कुरा हो।
बिहीबार, मंसिर १६, २०७३ १९:०५:३७